WordPress मा खोज्नुहोस्, अनुगमन गर्नुहोस्, र irect०404 त्रुटिहरू पुन: निर्देशित गरेर कसरी खोजी र्यान्क बढाउने Martech Zone
बुधबार, फेब्रुअरी 24, 2021 बिहीबार, मार्च ० 24, २०२० Douglas Karr
हामी अहिले नयाँ WordPress साइट लागू गर्नका साथ एक उद्यम ग्राहकलाई सहयोग गरिरहेका छौं। तिनीहरू बहु-स्थान हुन्, बहु-भाषा व्यवसाय र हालका वर्षहरुमा खोज को सम्बन्ध मा केहि खराब नतीजाहरु छ। जब हामी उनीहरूको नयाँ साइटको योजना बनाइरहेका थियौं, हामीले केहि समस्याहरू पत्ता लगायौं:
अभिलेख - तिनीहरूले थियो पछिल्लो दशकमा धेरै साइटहरू उनीहरूको साइटको URL संरचनामा प्रदर्शन भिन्नताका साथ। जब हामीले पुरानो पृष्ठ लिंकहरू परीक्षण गर्‍यौं, उनीहरूको भर्खरको साइटमा उनीहरू 404०XNUMX डिग्री थिए।
Backlinks - जब हामी प्रयोग गरेर ब्याकलिink्क अडिट गर्‍यौं Semrush,
अनुवाद - उनीहरूको धेरै जसो दर्शक हिस्पैनिक हो, तर तिनीहरूको साइट केवल अनुवाद बटनमा भर पर्दछ बरु साइटमा एम्बेडेड, मैन्युअल रूपले अनुवादित पृष्ठहरू भन्दा।
तिनीहरूको अन्तिम साइट थियो स्वामित्व एसईओ एजेन्सी द्वारा तिनीहरू काम गर्दै थिए ... मेरो विचारमा एक धेरै छाया अभ्यास जुन मूलतः व्यवसाय मालिकलाई बंधक बनाउँछ। त्यसोभए, अगाडि बढ्दै हामीले पूर्ण रूपमा स्क्र्याचबाट नयाँ साइट सिर्जना गर्नुपर्नेछ र यसलाई अप्टिमाइज गर्नुपर्नेछ ... ग्राहकको लागि ठूलो खर्च।
नयाँ रणनीति को एक महत्वपूर्ण हिस्सा माथिका ती issues मुद्दाहरूको फाइदा लिनु हो। हामीले यो सुनिश्चित गर्नु पर्छ कि हामीले सबै हराइरहेका पृष्ठहरू (3०404 त्रुटिहरू) मा रिडिरेक्टहरू सम्मिलित गर्दछौं र हामी उनीहरूको बहुभाषीय खोज प्रयोगकर्ताहरूलाई अनुवादित पृष्ठहरू थपेर ठूलो अक्षरमा राख्न सक्दछौं। यस लेखमा, म ध्यान केन्द्रित गर्दैछु 404 त्रुटि मुद्दा - किनकि यसले उनीहरूको खोज इञ्जिन श्रेणीकरणमा चोट पुर्‍याइरहेको छ।
किन 404०XNUMX त्रुटिहरू एसईओ र्याs्कि Forका लागि खराब छन्
ग्राहकहरु र व्यवसायहरु लाई स्पष्टीकरण को सरल बनाउन को लागी, म तिनीहरुलाई सँधै जान्न दिन्छु कि खोज इन्जीनहरु सूचकांक एक पृष्ठ र पृष्ठमा रहेको सामग्री द्वारा निर्दिष्ट कुञ्जी शब्दहरूमा यसलाई प that्क्तिबद्ध गर्नुहोस्। तथापि, तिनीहरू श्रेणी यसको लोकप्रियतामा आधारित पृष्ठ - सामान्यतया अन्य साइटहरूमा ब्याकलिks्कहरूमा अनुवाद गरिएको।
त्यसोभए ... कल्पना गर्नुहोस् कि तपाईंसँग तपाईंको साइटमा वर्षौं अघिदेखि जुन पृष्ठ एकदम राम्रो देखिन्छ र विभिन्न स्रोतहरूबाट लिंक गरिएको छ। तपाईं त्यसपछि नयाँ साइट निर्माण गर्नुहोस् जुन त्यो पृष्ठ टाढा जान्छ। परिणाम यो छ कि जब खोजी ईन्जिनले ब्याकलिks्कहरू क्रल गर्दछ ... वा अर्को साइटमा प्रयोगकर्ताले लिंक क्लिक गर्दछ ... यसले तपाईंको साइटमा 404०XNUMX त्रुटि निम्त्याउँछ।
आउच त्यो प्रयोगकर्ताको अनुभवका लागि नराम्रो छ र खोज इञ्जिन प्रयोगकर्ताहरूको अनुभवका लागि नराम्रो छ। नतिजाको रूपमा, खोज इञ्जिनले ब्याकलिink्कलाई वेवास्ता गर्दछ ... जसले अन्ततः तपाईंको साइटको अधिकार र र्याकि drops ड्रप गर्दछ।
राम्रो समाचार यो हो कि एक आधिकारिक साइटमा ब्याकलिks्कहरू वास्तवमै समाप्त हुँदैन! हामीले ग्राहकहरूको लागि नयाँ साइटहरू निर्माण गरेका छौं र नयाँ सामग्रीमा पुरानो लिंकहरूलाई ठीकसँग रीडायरेक्ट गरेका छौं… हामीले यी पृष्ठहरू स्काइराकेटमा हेरेका छौं खोजी ईन्जिन नतिजा पृष्ठहरूको शीर्षमा।SERP).
यदि तपाईंसँग एक एजेन्सी छ जुन तपाईंको कार्बनिक खोज ट्राफिकमा केन्द्रित छ (र सबै वेबसाइट डिजाइन एजेन्सी हुनुपर्दछ) वा यदि तपाईंसँग एसईओ परामर्शदाता छ कि यो काम नगरेको हो भने, म विश्वास गर्दछु तिनीहरू साँच्चिकै आफ्नो शिल्पमा लापरवाह छन्। खोज इञ्जिनहरू खरीद को इरादा संग प्रासंगिक संभावनाको लागि यातायात को एक शीर्ष स्रोत बन्न जारी छ।
त्यसो भए, यसको साथमा ... यदि तपाईं आफ्नो साइट पुन: डिजाईन गर्दै हुनुहुन्छ भने, निश्चित गर्नुहोस् कि तपाईं अडि and् गर्दै हुनुहुन्छ र तपाईंको यातायातलाई नयाँ पृष्ठहरूमा पुनःनिर्देशित गर्दै हुनुहुन्छ। र, यदि तपाईं आफ्नो साइट पुन: डिजाइन गर्नुहुन्न भने, तपाईंले अझै पनि तपाईंको 404०XNUMX पृष्ठहरू अनुगमन गर्नुपर्नेछ र तिनीहरूलाई उचित रूपमा पुनःनिर्देशित गर्नुपर्नेछ!
नोट: यदि तपाईं नयाँ साइटमा सर्दै हुनुहुन्न भने, तपाईं सीधा चरण monitor मा जान सक्नुहुनेछ यस प्रक्रियामा monitor०5 पृष्ठहरू मात्र निरीक्षण र पुनःनिर्देशन गर्न।
चरण १: हालको साइटको प्रि-लॉन्च अडिट
सबै हालका सम्पत्तिहरू डाउनलोड गर्नुहोस् - म यो एक उत्तम OSX अनुप्रयोग भनिन्छ साइटसकर.
सबै हालका URL हरूको सूची प्राप्त गर्नुहोस् - म यो संग चिन्ता माढक.
सबै ब्याकलिks्कहरूको सूची प्राप्त गर्नुहोस् - प्रयोग गर्दै Semrush.
अब, मसँग उनीहरूको हालको साइटमा प्रत्येक सम्पत्ति र प्रत्येक पृष्ठ छ। यसले मलाई ती साइटहरू नयाँ साइटमा नयाँ पथहरू (यदि तिनीहरूलाई पुनःनिर्देशित गर्न आवश्यक भएमा) लाई राम्रोसँग नक्सा गर्न सक्षम गर्न गइरहेको छ।
चरण २: पूर्व-सुरुवात योजना साइट पदानुक्रम, स्लगहरू, र पृष्ठहरू
अर्को चरण भनेको तिनीहरूको वास्तविक सामग्री अडिट गर्नु हो र हामी कसरी सरलीकृत र निर्माण गर्न सक्छौं भन्ने पहिचान गर्न सामग्री पुस्तकालय त्यो नयाँ साइटमा राम्रोसँग संरचित र संगठित छ। धेरै जसो समय, म खाली पृष्ठहरू मञ्चमा राखिएको वर्डप्रेस ईन्स्ट्यान्समा निर्माण गर्दछु ताकि मसँग मेरा लेखकहरू र डिजाइनरहरू काम गर्न पछि पछि सम्पन्न गर्न एक चेकलिस्ट हुन्छ।
म पुरानो हालको यूआरएलहरू र सम्पत्ति समीक्षा गर्न सक्छ मस्यौदा पृष्ठहरू पुनः रिपोलेट गर्न ताकि यो सुनिश्चित गर्न सजिलो भयो कि मसँग सबै आवश्यक सामग्रीहरू छन् र नयाँ साइटबाट केही पनि हराइरहेको छैन जुन पुरानो साइटमा थियो।
चरण:: नयाँ URL हरूमा पुरानो URL हरूको पूर्व प्रक्षेपण म्यापि।
यदि हामी यूआरएल संरचना सरल बनाउन सक्दछौं र पृष्ठ र पोस्ट स्लगहरू छोटो र सरल राख्न प्रयास गर्छौं भने, हामी गर्छौं। मैले धेरै बर्षहरूमा याद गरें कि रिडिरेक्ट गर्ने क्रममा केहि अधिकार हराउछ ... ती मध्येको अनुकूलनले बढाइएको सगाईलाई बढावा दिन्छ, जुन राम्रो क्रममा अनुवाद हुन्छ। म अबदेखि डराउँदिन एक उच्च श्रेणीकरण पृष्ठ पुन: निर्देशित गर्नुहोस् नयाँ युआरएलमा जब यो अर्थमा हुन्छ। यो स्प्रिडशिटमा गर्नुहोस्!
चरण:: पूर्व-सुरुवात आयात पुनर्निर्देशन
चरण in मा स्प्रिडशिट प्रयोग गरेर, म अवस्थित यूआरएलको एक सरल तालिका सिर्जना गर्दछ (डोमेन बिना) र नयाँ यूआरएल (डोमेनको साथ)। म यी redirects मा आयात गर्दछु रैंक मठ एसईओ प्लगइन नयाँ साइट सुरू गर्नु अघि। र्याक मठ हो उत्तम WordPress प्लगइन SEO को लागी, मेरो विचारमा। साइड नोट ... यो प्रक्रिया (र गरिनु पर्छ) पनि सकिन्छ यदि तपाईं हुनुहुन्छ भने पनि साइटलाई नयाँ डोमेनमा सार्दै.
चरण:: लन्च र unch०ss निगरानी गर्नुहोस्
यदि तपाईंले अहिलेसम्म सबै चरणहरू गर्नुभयो भने, तपाईंले नयाँ साइट पाउनुभयो, सबै रिडाइरेक्टहरू, सबै सामग्रीहरू, र तपाईं सुरूवात गर्न तयार हुनुहुन्छ। तपाईंको काम अझै सकिएको छैन ... तपाईंले नयाँ साइट मोनिटर गर्नै पर्छ कुनै पनि 404०XNUMX पृष्ठहरू दुई फरक उपकरणहरूको प्रयोग गर्नका लागि।
गुगल खोज कन्सोल - नयाँ साइट सुरू हुने बित्तिकै तपाईले XML साइटम्याप पेश गर्न चाहानुहुन्छ र एक दिनमा फेरि जाँच गर्नुहोस् कि नयाँ साइटमा केहि मुद्दाहरू छन् कि भनेर।
रैंक मठ SEO प्लगइनको 404०XNUMX मोनिटर - यो एक उपकरण हो जुन तपाईंले प्राय जसो प्रयोग गर्नुपर्दछ ... केवल जब तपाईं साइट सुरू गर्दै हुनुहुन्छ। तपाईंले यसलाई र्याक म्याथ ड्यासबोर्डमा सक्षम गर्न आवश्यक पर्दछ।
उदाहरणको रूपमा, हामीले बहु-स्थानको लागि साइट सुरू गर्‍यौं दंत चिकित्सक जो मेडिकेड कभरेजका साथ बच्चाहरूमा विशेषज्ञता दिन्छ। हामीले पत्ता लगाएका पृष्ठहरू मध्ये एक ब्याकलिks्कहरू समावेश गरिएको थिएन कि एक लेख थियो, बच्चा दांत १०१। अवस्थित साइटसँग लेख थिएन। वेब्याक मेशीनसँग मात्र एउटा अंश छ। त्यसोभए जब हामीले नयाँ साइट सुरू गर्‍यौं, हामीले यो सुनिश्चित गर्‍यौं कि हामीसँग एक व्यापक लेख, एउटा इन्फोग्राफिक, र सामाजिक ग्राफिक्स पुरानो यूआरएलबाट नयाँमा पुनर्निर्देशन सहित।
हामीले साइट सुरू गर्ने बित्तिकै, हामीले देख्यौं कि पुनर्निर्देशित ट्राफिक अब ती पुराना यूआरएलहरूबाट नयाँ पृष्ठमा गइरहेको छ! पृष्ठले केहि राम्रो ट्राफिक र क्रमबद्धको पनि छान्छ। हामी गरिएनौं, यद्यपि।
जब हामीले 404०404 मनिटर जाँच गर्‍यौं, हामीले धेरै युआरएलहरू भेट्यौं "शिशु दाँतहरू" जुन XNUMX०XNUMX पृष्ठमा अवतरण गर्दै थिए। हामीले नयाँ पृष्ठमा रिडिरेक्टको बहु निश्चित पथहरू थपेका छौं। साइड नोट ... हामी एक प्रयोग गर्न सक्दछौं नियमित अभिव्यक्ति सबै यूआरएलहरू क्याप्चर गर्न तर हामी सुरु गर्न सतर्क छौं।
माथिको स्क्रिनशट वास्तवमा रै Math्क मठ प्रो हो जसले तपाईंको पुनःनिर्देशनहरू वर्गीकरण गर्ने क्षमता समावेश गर्दछ ... साँच्चै राम्रो सुविधा। हामी रैंक मठ प्रोको साथ पनि गयौं किनकि यसले बहु-स्थान स्कीमा समर्थन गर्दछ।
अब, पृष्ठ नयाँ साइटमा उनीहरूको # 8 सबैभन्दा धेरै ट्र्याफिक गरिएको पृष्ठ हो सुरूवात भएको एक हप्ता भित्र। र त्यहाँ धेरै वर्षसम्म त्यहाँ was० several पृष्ठ थियो जब कोही आउँथे! यो एउटा विशाल छुटेको अवसर थियो जुन हामीले वेबमा तिनीहरूको साइटमा अवस्थित पुरानो लिंकहरूलाई पुनःनिर्देशित र अनुगमन गर्ने बारेमा होशियार भएनौं भने त्यो भेटिने थिएन।
र्‍या Math्क म्याथसँग 404० errors त्रुटिहरू फिक्स गर्ने बारेमा पनि विस्तृत लेख छ जुन म तपाईंलाई पढ्न प्रोत्साहित गर्दछु।
रैंक मठ: कसरी 404०XNUMX त्रुटिहरू ठीक गर्ने
टैग: 404404 त्रुटिहरूअडिटक्रल साइटगुगल खोजी कन्सोलपुनर्निर्देशनहरू आयात गर्नुहोस्नक्शा युआरएलहरूजैविक श्रेणीकरणश्रेणी गणित प्लगइनश्रेणी गणित एसईओश्रेणी गणित एसईओ प्लगइनर्याङ्किङ्गपुन: निर्देशित गर्दछभ्यागुता चिच्याउँदैखोज रैंकिंगsemrushएसईओएसईओ रैंकिंगserpसाइट शोकरसाइटसकरWordPress